Ubuhlobo Phakathi Kokunikela KukaNkulunkulu NgoJobe KuSathane Nezinhloso Zomsebenzi KaNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Nakuba abantu abaningi manje beqonda ukuthi uJobe wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu egwema okubi, lokhu kuqonda akubenzi bazazi kakhudlwana izinhloso zikaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo nokungabuthandi ubuntu nezinto ezifunwa uJobe, bambuza imibuzo elandelayo uNkulunkulu: UJobe wayelungile futhi eqotho, abantu babemazisa kakhulu, ngakho kungani uNkulunkulu amnikela kuSathane futhi wavuma ukuba ahlukunyezwe? Imibuzo enjalo kufanele ibe sezinhliziyweni zabaningi—kunalokho, lokhu kungaba umbuzo osezinhliziyweni zabantu abaningi. Njengoba uhlupha abantu abaningi kangaka, kumele siwundlale etafuleni lo mbuzo, siwuchaze ngendlela efanele.
Konke okwenziwa uNkulunkulu kunesidingo, futhi kubalulekile, ngoba konke akwenzayo kumuntu kuthinta ukuqondisa Kwakhe nensindiso yesintu. Ngokwemvelo, umsebenzi uNkulunkulu awenza kuJobe awehlukile, nakuba uJobe ayelungile futhi eqotho emehlweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu wenzani futhi kanjani, kungakhathaliseki ukuthi izindleko ziyini, noma imigomo Yakhe, inhloso yezenzo Zakhe ayishintshi. Inhloso Yakhe ukusebenzisa kumuntu izwi likaNkulunkulu, izimfuneko zikaNkulunkulu, nentando kaNkulunkulu ngomuntu; ngamanye amazwi, iwukwenza kumuntu konke lokho uNkulunkulu akholelwa ukuthi kuhle ngokuvumelana nezigaba Zakhe, avumele umuntu ukuba aqonde inhliziyo kaNkulunkulu futhi aqonde isiqu sikaNkulunkulu, nokumvumela ukuba alalele ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, kanjalo enze umuntu esabe uNkulunkulu futhi agweme okubi—konke kuwuphawu olulodwa lwenhloso kaNkulunkulu kukho konke akwenzayo. Olunye uphawu ukuthi, ngenxa yokuthi uSathane uyisembozo futhi uyinhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uvame ukunikelwa kuSathane; lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu wayevame ukuvumela abantu ukuthi babone ububi bukaSathane ngaphambi kokuba uSathane abalinge noma abahlasele, kanjalo evumele abantu ukuba bazonde uSathane futhi bakwazi ukubona uhlangothi lwakhe olubi. Le nqubo ibavumela ukuba bakhululeke kancane kancane ekulawulweni uSathane, nasekumangalelweni uSathane, ekugxambukeleni, nasekuhlaselweni—baze babonge izwi likaNkulunkulu, ulwazi lwabo nokulalela uNkulunkulu, kanye nokholo lwabo kuNkulunkulu nokumesaba; bayathuthumela lapho bemangalelwa uSathane; bayokhululwa lapho kuphela emandleni kaSathane. Ukukhululwa kwabantu kuyosho ukuthi uSathane unqotshiwe, kuyosho ukuthi abasekhona bawukudla emlonyeni kaSathane—ukuthi esikhundleni sokubagwinya, uSathane wabalaxaza. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abanjalo baqotho, banokholo, bayalalela futhi besaba uNkulunkulu, nokuthi bamelene kakhulu noSathane. Bamthela ngehlazo uSathane, bamenza abe igwala, futhi bamnqoba ngokuphelele. Ukholo lwabo ekulandeleni uNkulunkulu, ukulalela kwabo nokwesaba uNkulunkulu kunqoba uSathane, futhi kumenza aphonse ithawula. Abantu abanjalo kuphela abazuzwe uNkulunkulu ngeqiniso, futhi yibo uNkulunkulu ahlose ukubasindisa. Uma befisa ukusindiswa, nokuzuzwa uNkulunkulu ngokuphelele, khona-ke bonke abalandela uNkulunkulu kumele balingwe futhi bahlaselwe uSathane. Labo abamelana nalezi zilingo nokuhlaselwa bakwazi ngokuphelele ukunqoba uSathane, yilabo abasindiswe uNkulunkulu. Okusho ukuthi, labo abasindiswe uNkulunkulu yilabo abadlule ezilingweni, futhi abaye balingwa futhi bahlaselwa uSathane izikhathi eziningi. Labo abasindiswe uNkulunkulu bayayiqonda intando nezimfuneko zikaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuzithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi abayishiyi indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngemva kwezilingo zikaSathane. Labo abasindiswa uNkulunkulu bathembekile, banenhliziyo enhle, benza kube nomehluko phakathi kothando nenzondo, banobulungiswa futhi bahluzekile, futhi bayakwazi ukunakekela uNkulunkulu nokwazisa konke okukaNkulunkulu. Abantu abanjalo uSathane ngeke ahlale ebamangalela futhi ebahlukumeza, bakhululeke ngokuphelele, futhi bakhululwe ngokuphelele. UJobe wayeyindoda ekhululeke kanjalo, futhi lokhu yisizathu esenza uNkulunkulu wamnikela kuSathane.
UJobe wahlukunyezwa uSathane, kodwa waphinde wathola inkululeko yaphakade, wazuza okulungile wangaphinde wonakaliswa uSathane, wamhlukumeza futhi wammangalela, kunalokho waphila ngokukhululeka ekukhanyeni kukaNkulunkulu, waphila ngemva kokubusiswa uNkulunkulu. Akekho owayengamphuca noma ashabalalise leli lungelo. Lalinikezwe uJobe ngenxa yokholo lwakhe, isifiso, nokulalela nokwesaba uNkulunkulu; uJobe wasikhokha isikweletu sokuphila ukuze athole injabulo emhlabeni, athole ilungelo lokuba notho, athotshelwe yiZulu nomhlaba, akhuleke kuMdali womhlaba ngaphandle kokuphazamiseka. Lowo kwakuwumphumela obuhlungu wezilingo ezabekezelelwa uJobe.
Lapho abantu besazosindiswa, ukuphila kwabo kwakuvame ukulawulwa uSathane. Ngamanye amazwi, abantu abangakaze basindiswe bayiziboshwa zikaSathane, abanayo inkululeko, abakhululiwe kuSathane, abafanelekile futhi abanaso isibopho sokukhonza uNkulunkulu, futhi uSathane ubafuna phansi phezulu uyabahlasela. Abantu abanjalo ayikho injabulo abangakhuluma ngayo, abanalo ilungelo lokukhuluma ngokuphila, futhi asikho isithunzi abangakhuluma ngaso. Kulapho ubhukula ulwa noSathane, usebenzisa ukholo lwakho nokulalela uNkulunkulu, nokwesaba uNkulunkulu njengesikhali sokulwa impi yokufa nokuphila noSathane, lapho uyomnqoba khona ngokugcwele uSathane futhi umenze adle phansi noma nini lapho ekubona, ukuze ayeke ukukuhlasela nokukumangalela—kulapho kuphela lapho uyosindiswa khona, ukhululeke. Uma uzimisele ukuhlukana ngokuphelele noSathane, kodwa ungenazo ikhali ezizokusiza unqobe uSathane, usazoba sengozini; ngokuhamba kwesikhathi lapho usuhlukunyezwa uSathane uyobe ungasenawo amandla asele kuwe, kodwa uyobe usakwazi ukufakaza, uyobe ungakakwazi ukuzikhulula ekuhlaselweni nasekumangalelweni uSathane, khona-ke uyoba nethemba elincane lensindiso. Ekugcineni, lapho kumenyezelwa ukuphela komsebenzi kaNkulunkulu, uyobe usabanjwe uSathane, ungakwazi ukuzikhulula, futhi uyobe ungenalo ithemba. Ngakho umphumela uwukuthi, abantu abanjalo uSathane uyobathumba ngokuphelele.
Yamukela Uvivinyo LukaNkulunkulu, Nqoba Izilingo ZikaSathane, Bese Uvumela UNkulunkulu Akuzuze
Phakathi nomsebenzi Wakhe wokulungisa nokweseka umuntu, uNkulunkulu wembulela umuntu yonke intando nezimfuneko Zakhe, futhi uveza izenzo Zakhe, isimo, nalokho anakho nayikho kumuntu. Inhloso Yakhe ukuhlomisa umuntu, nokuthi amvumele azi amaqiniso amaningi ngoNkulunkulu ngesikhathi emlandela—amaqiniso ayizikhali umuntu azinikwe uNkulunkulu ukuze alwe noSathane. Njengoba ehlonyisiwe, umuntu kumele abhekane novivinyo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuvivinya umuntu, kodwa eziningi zazo, zihlanganisa “ukubambisana” nesitha sikaNkulunkulu: uSathane. Okusho ukuthi, ngemva kokunika umuntu izikhali azolwa ngazo noSathane, uNkulunkulu unikela umuntu kuSathane avumele uSathane ukuba “amvivinye.” Uma umuntu engakwazi ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, uma ephunyuka ephila kuSathane, khona-ke umuntu uyobe uphumelele ovivinyweni. Kodwa uma umuntu ehluleka ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, ezithoba kuSathane, khona uyobe wehlulekile ovivinyweni. Kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu uhlola ini kumuntu, into ayihlolayo ukuthi umuntu uyaqina yini lapho uSathane ehlasela ubufakazi bakhe, nokuthi uyamshiya yini uNkulunkulu azithobe kuSathane ngesikhathi uSathane emdwengula. Kungashiwo ukuthi ukusindiswa komuntu kuncike ekutheni uyamnqoba yini uSathane, noma ukuthi uyayithola yini inkululeko kuncike ekutheni uyakwazi yini ukuphakamisa izikhali azinikwe uNkulunkulu ukuze anqobe uSathane, enze uSathane ahlukane naye ngokuphelele. Uma uSathane ephelelwa ithemba futhi emshiya, lokho kusho ukuthi uSathane akasoze azama ukuthatha lowo muntu kuNkulunkulu, ngeke aphinde amangalele lowo muntu, ngeke aphinde amhlasele; umuntu onjalo kuphela oyozuzwa uNkulunkulu. Lena inqubo ephelele uNkulunkulu azuza ngayo abantu.
Okwedlule：Mayelana NoJobe (II)
Okulandelayo：Isixwayiso Nokukhanyiselwa Ubufakazi BukaJobe Obubunika Izizukulwane Ezilandelayo